Kuwedzera Kuwedzera Kukosha Kudhinda - Intec Printing Solutions Ltd
Iva mubatsiri weIntec
Mitemo & zvirevo
Kucheka & kucheka
Tsvaga chigadzirwa nemuenzaniso
Vanotyairi & kudhanilodha
ColorSplash mushandisi bhuku remitauro yepasirese
LPS215 label mhinduro
Bhalisa chigadzirwa chitsva
'Maita Sei' vhidhiyo rutsigiro
Rubatsiro ruri kure
Warranti & returns
MSDS - hutano & kuchengeteka
Inokurudzirwa & certified media
Factory nzira yokubudisa
Yakasiyana-siyana yemamodheru kuti ienderane nekushandisa uye kubereka
Foiling & laminating systems
Wedzera premium mhedzisiro ne toner foils, laminates uye holographic mafirimu
Digital mavara ekudhinda masisitimu
Modular, yakakwira tsanangudzo graphic arts printers
Digital die cutters | Foilers & laminators
Intec yanga iri pamwoyo weBritish innovation uye dhizaini yeindasitiri yepasi rose yekudhinda nekupedzisa kubvira 1989 uye yakura kuita mupi mukuru wemhinduro dzakasiyana dzemaprinta edhijitari, foiler uye michina yekucheka.
Sarudzo yedhijitari yekucheka-kufa uye yekutsvoda-yekucheka mhinduro kune dzakasiyana siyana dzekushandisa kubva pakurongedza kusvika kune zvinyorwa. Maflatbed uye oto-feed yekucheka masisitimu, bhizinesi kadhi yekucheka michina uye yakatsaurirwa pepa rakadyiswa kutsvoda-cheka label yekucheka masisitimu.
Foiler / laminators
Desktop uye yemahara-yakamira nyanzvi mbiri mbiri foiling uye lamination zvishandiso, zvakagadzirirwa kupa inokwanisika uye pane-inoda-mu-imba mhinduro yekuwedzera esimbi foils, laminates uye holographic mhedzisiro.
Wedzera zviri nyore kupedzisa kwekutanga uye zvinokatyamadza mhedzisiro kune akadhindwa mapepa.
Kirasi-inotungamira uye inotengeka maprinta edhijitari, anotsigira sarudzo yakakura yemhando dzemidhiya. Rudzi urwu runosanganisira, sarudzo yemhando ina dzemhando dzemapfupi & epakati anomhanya emakadhi ekudhinda, kurongedza, mabhena, mavara, mahamvuropu, kutamisa midhiya uye zvimwe zvakawanda.
Wona yazvino Intec chigadzirwa renji.
Ona uye dhawunirodha mabhurocha echigadzirwa.
Ona mavhidhiyo echigadzirwa.
Usangotora izwi redu pazviri - izvi ndizvo zvinotaurwa nevatengi vedu - tinya kune zvidzidzo.
Yedu Intec ColorFlare inotichengetera mari uye inounza bhizinesi idzva rinonakidza kune yedu yakagara yakasimbiswa yekushambadzira yekudhinda kambani.
Tony Bowyer Dhinda
Yedu ColorCut flatbed cutter yakabatsira zvakanyanya kushandura bhizinesi redu nekuwedzera kugadzirwa & kugadzira mikana mitsva.
Nhaka Yekutamba Makadhi
Tinogona kugadzira prototype imwe chete kana kunyange batch rese remasampuli, nekukurumidza uye pane-kuda - nekuvimba mumhando yebasa.
Vadivelu Comedy Whitebox Studios
Iwe unoda Remote Rutsigiro kubva kuIntec?
Wana rubatsiro pakarepo kubva kuIntec tekinoroji nyanzvi - tichagovera skrini yako kuburikidza neTeamViewer uye togadzirisa chero nyaya dzaungasangana nazvo neIntec mudziyo wako. Fonera Intec kutanga kuti bhora ritenderere.
Wana rubatsiro kuburikidza neTeamViewer
Tel: +44 (0) 1202 845960
Tel: + 1-813-949-7799
Intec ikambani yepasi rose, ine mahofisi muUK neUSA, inotsigira network yevatengesi pasi rese. Yakavambwa anopfuura makore makumi matatu apfuura, Intec inoremekedzwa zvakanyanya nekuda kwayo yakavimbika, nyanzvi, nyanzvi zvigadzirwa zvakanangwa chete kudhinda & indasitiri yemifananidzo. Verenga zvakawanda pano. Verenga kuti Intec iri 'kuita mutsauko' sei kuburikidza nayo basa rerudo.
Mashoko ekunyoresa kwekambani
Iva Intec Partner
Bata Intec UK
Bata Intec USA
Nyorera pane Newsletter peji kuva pakati pekutanga kunzwa nhau.
Iyo kambani Intec Printing Solutions Ltd
Wadii kunyorera kuIntec newsletter usati watitumira email - uye uwane mukana we…
[contact-form-7 id = "320" title = "Contact sales"]